HTML ढाँचामा पाठ कागजातहरू बचत गर्दा
तपाईँ LibreOffice राइटर कागजात HTML ढाँचामा बचत गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसैले तपाईँ यसलाई वेब ब्राउजरमा हर्न सक्नुहुन्छ. यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने, बिभाजक उत्पादन गर्नका लागि तपाईँ पृष्ठ बिच्छेद अनुच्छेद अनुच्छेद शैलीसँग संयुक्त हुन सक्नुहुन्छ HTML पृष्ठ प्रति समय शैली कागजातमा देखिन्छ. LibreOffice राइटर स्वत: पृष्ठ सिर्जना गर्दछ यी पृष्ठहरूको प्रत्येक हाइपरलिङ्कहरू सहित.
एउटा पूर्वनिर्धारित LibreOffice अनुच्छेद अनुच्छेद शैलीहरू लागू गर्नुहोस्, उदाहरणका लागि, "अनुच्छेद १", अनुच्छेदहरूमा जहाँ तपाईँ नयाँ HTML पृष्ठ उत्पादन गर्न चाहनुहुन्छ.
फाइल - पठाउनुहोस् - HTML कागजात सिर्जना गर्नुहोस्रोज्नुहोस्.
शैलीहरू बाकसमा, अनुच्छेद शैली चयन गर्नुहोस् जुन तपाईँ नयाँ HTML पृष्ठ उत्पादन गर्न चाहनुहुन्छ.
HTML कागजातका लागि बाटो र नाम प्रविष्ट गर्नुहोस्, र बचतक्लिक गर्नुहोस्.
Title is: HTML ढाँचामा पाठ कागजातहरू बचत गर्दा